GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel nke Mbụ 28:1-25
Sọl gara na nke nwaanyị na-agba afa n’En-dọọ (1-25)
28 N’oge ahụ, ndị Filistia kpọkọtara ndị agha ha ka ha lụso ndị Izrel agha.+ Ekish wee sị Devid: “Ị manụ na gị na ụmụ nwoke ndị so gị ga-eso m gaa agha.”+ 2 Devid asị Ekish: “Ị ma nnọọ ihe ohu gị ga-eme.” Ekish asị Devid: “Ọ bụ ya mere m ga-eji họpụta gị ka ị na-eche m nche mgbe niile.”+ 3 Samuel anwụọla. Izrel niile eruokwarala ya uju ma lie ya na Rema, bụ́ obodo ya.+ Sọl emeekwala ka a ghara inwe ndị na-agba afa na ndị na-akọ ihe ga-eme n’ọdịnihu n’Izrel.+ 4 Ndị Filistia zukọtara maa ụlọikwuu ha na Shunem.+ Sọl kpọkọtakwara ndị Izrel niile, ha amaa ụlọikwuu nke ha na Gilboa.+ 5 Mgbe Sọl hụrụ ndị agha ndị Filistia, egwu jidere ya, obi ana-akụkwa ya kpum kpum.+ 6 Sọl nọ na-ajụ Jehova ase,+ ma Jehova anaghị aza ya ihe ọ bụla. O sighị ná nrọ ma ọ bụ n’ọnụ ndị amụma ma ọ bụ jiri Yurim*+ zaa ya ihe ọ bụla. 7 N’ikpeazụ, Sọl sịrị ndị na-ejere ya ozi: “Chọọrọnụ m nwaanyị na-agba afa. + M ga-agakwuru ya jụọ ya ase.” Ndị na-ejere ya ozi asị ya: “E nwere nwaanyị na-agba afa n’En-dọọ.”+ 8 Sọl wee jigharịa ejiji, yiri uwe ọzọ, ya na ndị ohu ya abụọ esoro gakwuru nwaanyị ahụ n’abalị. Sọl asị ya: “Biko, gbaara m afa, gwa m ihe ga-eme n’ọdịnihu,+ kpọpụtakwara m onye m ga-akpọrọ gị aha ya.” 9 Ma, nwaanyị ahụ sịrị ya: “Ị manụ ihe Sọl mere, otú o si mee ka a ghara inwe ndị na-agba afa na ndị na-akọ ihe ga-eme n’ọdịnihu n’ala a.+ Gịnịzi mere i ji na-anwa isiri m* ọnyà ka e gbuo m?”+ 10 Sọl wee ṅụọrọ ya iyi n’aha Jehova, sị: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, na-aṅụ iyi na i mee ihe a, a gaghị asị na i mere ihe ọjọọ.” 11 Nwaanyị ahụ asị: “Ònye ka m ga-akpọpụtara gị?” Ya asị: “Kpọpụtara m Samuel.” 12 Mgbe nwaanyị ahụ hụrụ “Samuel,”*+ o tiri ezigbo mkpu sị Sọl: “Gịnị mere i ji ghọgbuo m? Ị bụ Sọl!” 13 Eze asị ya: “Atụla egwu. Gịnị ka ị hụrụ?” Nwaanyị ahụ asị Sọl: “Ahụrụ m otu onye yiri chi ka o si n’ala na-apụta.” 14 Sọl ajụọ ya ozugbo ahụ, sị: “Olee otú ọ dị?” Ya asị: “Ọ bụ agadi nwoke na-apụta. O yikwa uwe elu na-enweghị aka.”+ Sọl wee mata na ọ bụ “Samuel,” hulata kpọọ isiala. 15 “Samuel” wee sị Sọl: “Gịnị mere i ji na-achọ m, na-enye m nsogbu?” Sọl asị: “Anọ m n’ezigbo nsogbu. Ndị Filistia na-alụso m agha. Chineke ahapụkwala m. Ọ naghịzi atụpụrụ m ọnụ. O sighị n’ọnụ ndị amụma ma ọ bụ ná nrọ gwa m ihe ọ bụla.+ Ọ bụ ya mere m ji na-akpọ gị ka ị gwa m ihe m ga-eme.”+ 16 “Samuel” wee sị: “Gịnịzi mere i ji na-achọ ịjụta m ihe, ebe ọ bụ na Jehova ahapụla gị,+ ị ghọọkwala onye iro ya? 17 Jehova ga-eme ihe o si n’ọnụ m kwuo. Jehova ga-anapụta gị alaeze Izrel nye ya Devid bụ́ nwoke ibe gị.+ 18 Ebe ọ bụ na i meghị ihe Jehova kwuru, i gbughịkwa ndị Amalek kpasuru ya ezigbo iwe,+ ọ bụ ya mere Jehova ji na-emeso gị otú a taa. 19 Jehova ga-enyefekwa gị na ndị Izrel n’aka ndị Filistia.+ Echi, gị+ na ụmụ gị ndị nwoke+ ga-abịakwutekwa m. Jehova ga-enyefekwa ndị agha Izrel n’aka ndị Filistia.”+ 20 Sọl wee daa n’ala ozugbo ahụ, ezigbo ụjọ ejidekwa ya n’ihi ihe ahụ “Samuel” kwuru. Ike gwụrukwara ya n’ọkpụkpụ, n’ihi na o righị nri n’ụbọchị ahụ niile nakwa n’abalị ahụ niile. 21 Mgbe nwaanyị ahụ bịakwutere Sọl, hụkwa na obi erutụghị ya ala, ọ sịrị ya: “Mụnwa bụ́ ohu gị emeela ihe i kwuru, mee ihe gaara ata isi m+ iji mee ihe ị gwara m. 22 Ugbu a, biko, gee ohu gị ntị. Ka m wetatụrụ gị achịcha ka ị taa, ka ị hụ ike ị ga-eji laa.” 23 Ma ọ jụrụ ajụ wee sị: “Agaghị m eri ihe.” Ma, ndị na-ejere ya ozi nakwa nwaanyị ahụ nọ na-arịọ ya. N’ikpeazụ, o gere ha ntị wee si n’ala bilie, nọdụ n’oche. 24 Nwaanyị ahụ gara ngwa ngwa gbuo nwa ehi gbara agba o nwere n’ụlọ ya, gwọọkwa ntụ ọka, were ya mee achịcha na-ekoghị eko. 25 Mgbe o mechara, o buteere ya Sọl na ndị na-ejere ya ozi, ha ataa. Mgbe ha tachara, ha ebilie lawa n’abalị ahụ.+
^ Ma ọ bụ “onye dị ka Samuel.”